घर एशियाई फुटबल स्टोरीहरू पार्क Ji सुपन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
अन्तिम अपडेट गरिएको डिसेम्बर 28, 2018
LB सर्वश्रेष्ठ फुटबल प्रतिभा को पूर्ण स्टोरी प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वश्रेष्ठ नाम बाट ज्ञात गर्दछ; 'तीन फेफेरो पार्क'। हाम्रो पार्क Ji Sung बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरु को पूरा खाता लाउँछ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन / पृष्ठभूमि रिश्ते लाइभ र उनको बारे मा धेरै ज्ञात तथ्याङ्क धेरै बन्द र विश्लेषण गर्नु अघि आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ। अगाडी एडो बिना, चल्दैन।
पार्क Ji Sung बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य- बाल्यकाल
पार्क Ji-Sung पार्क सुंग-जोंग (पिता) र जंग माउंग-जे (आमा) द्वारा गोहङ्गमा, फरवरी 25, 1981 मा दक्षिण कोरियामा जन्मिएको थियो। उहाँ सुभोन शहरमा हुनुभयो।
पार्क Ji-sung फुटबल खेलाडीहरूलाई लाइभ र टिभिमा खेल्दै माया गर्नुहुँदा उनी बच्चाको रूपमा। यो कसरी खेलमा रूचि विकास भयो। तथापि, त्यहाँ एउटा समस्या थियो। ऊ धेरै छोटो र सानो थियो। यो उनले एक सीमाको रूपमा देखाए। आफ्नो शारीरिक समस्याहरू समाधान गर्न बोलीमा, पार्कका आमाबाबुले हर्बलमा आफ्नो प्रतिभाशाली फुटबलको छोरो ठूलो र चिसो पाउने गर्थे। तिनीहरूले उहाँलाई हर्बल पानी पिउन बनायो उचाई माढक रस र हिरण रक्त संग सबै विश्वास संग विश्वास छ कि यसले उनलाई ठूलो बढ्न मद्दत गर्नेछ। सौभाग्य देखि, यसले मद्दत गर्यो।
पार्क जी-सङ्ग एक पटक फेरि आफैं विश्वस्त भयो र फेरि फेरि फुटबल सुरु गर्यो। उनले आफ्नो प्रारम्भिक विद्यालयको लागि खेलेका थिए र प्रतियोगिताको माध्यमबाट उत्कृष्ट खेले। दक्षिण कोरियाली फुटबलको उज्ज्वल जवान ताराहरू को रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न लामो समयसम्म यो लागेन। उच्च विद्यालय पछि, उनले दक्षिण कोरियाको Myongji विश्वविद्यालयमा नामांकन गरे।
पार्क Ji Sung बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य-पारिवारिक जीवन
उनको पिताको नाम पार्क सुङ्ग-जोंग हो, जबकि उनको आमा नाम जंग म्यांगुन-जे हो। दुबै आमाबाबुहरु सँगै उनीहरुका छोराहरु लाई आफ्ना सपनाहरु पूरा गर्न को लागी हेर्न को लागी दृढ रह्यो। उनको आमा, म्यांगुङ्ग-जे पिता भन्दा भन्दा अमीर थिए। उनले एक पटक एक कोरियाई धातु कारखाना व्यवस्थापन गरे। अब सेवानिवृत्त।
पार्क Ji Sung बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य-सम्बन्ध जीवन
पार्कमा ठूलो मात्रामा आफ्नो निजी जीवनलाई रोचक स्थानमा राखिएको थियो र उनीहरूको आगामी विवादास्पद प्रेस कन्फिगरेसनमा अघिल्लो टेलिभिजन रिपोर्टर किम मिन जीलाई उद्घाटन गर्दै मिडियाले आश्चर्यचकित गरे। तिनीहरूले दक्षिण कोरियामा 27 जुलाई 2014 मा विवाह गरे। उनीहरूका छोरी नोभेम्बर 2015 मा जन्मिएको थियो।
हालै सेवानिवृत्त फुटबल प्लेयरको रूपमा हस्तियाँहरूले भवनलाई बाढी लगाए पार्क जी सुंग र पूर्व एसबीएस उद्घोषक किम मिन जी जुलाई 27 मा आफ्नो विवाह समारोह आयोजित। विवाह सियोलमा सुन्दर शेर्टोन ग्रान्ड वाइभरहाइल होटलमा भएको थियो। यो समारोह एसबीएस उद्घोषक द्वारा नियुक्त गरिएको थियो Baeung Jae, र बधाई गीत ग्रुप द्वारा गाईएको थियो किम जू वू.
जस्तै अपेक्षित, अतिथि सूची ले धेरै प्रसिद्ध ज्ञात सितारों जस्तै कि पौराणिक फुटबल कोच शामिल थियो Guus Hiddink, जो4विश्व कप को समयमा कोरिया मा शीर्ष 2002 सम्म पुगन को लागि मदद, र साथी मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टार Patrice Evra (युरोपमा उनको सबैभन्दा राम्रो मित्र)।
यो ध्यान दिनु आवश्यक छ कि पार्क जी सुङ्ग र किम मिन जी अजनबी देखि 2011 मा प्रेमीहरुलाई बदल्यो, र उनि 2013 पछि उनको सम्बन्ध को बारे मा सार्वजनिक भएको छ।
पार्क Ji Sung बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य-Charitable Works
5 अक्टोबर 2014 मा, यसलाई घोषणा गरिएको थियो कि पार्कले मैनचेस्टर युनाइटेडको लागि विश्वव्यापी राजदूतको रुपमा भूमिका खेल्न थालेको थियो। उनले एशियाई ड्रीम कप वार्षिक चैरिटी कार्यक्रममा भाग लिन सक्ने टोलीमा पनि भाग लिइसकेको छ "पार्क Ji-Sung र मित्रहरू।
पार्क Ji Sung बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य-उहाँको मित्रताको अनर्थ कथाले सबै बाधाहरू पार गर्यो
मैनचेस्टर युनाइटेड डिफेन्डर प्याट्रिस इभ्रा र जो सुङ्ग पार्क सबैभन्दा राम्रो साथी हुन्। पिचमा मात्र होइन तर पिच बन्दै जान्छ, जस्तै ईरा प्रायजसो पार्कमा मनपर्छ। उनीहरूको बीचको कुराकानीले जोडालाई साथसाथै नजिक ल्याएको छ, जस्तै लगभग भाइहरू जस्तै। ईरालाई पार्कको बुबा, पार्क सुङ्ग जोंग, पापालाई पनि कल गर्दछ।
इङ्गल्याण्डमा बस्ने, दुई खेलाडीहरू एकअर्कामा धेरै निर्भर हुन्थे किनभने उनीहरूले उनीहरूको कठिनाइहरूलाई एकसाथ जिते। पार्क सुङ्ग जोंगले अब जोडीको अनपेक्षित कथाहरू बताउँछ।
पार्क सुङ्ग जोंग-
जब मैनचेस्टर युनाइटेड देशमा खेल हुन्छ हाम्रो घर एकत्रित पोइन्ट हुन्छ। किनकि पार्किंग एयरपोर्टमा महँगो छ, धेरै खेलाडीहरू हाम्रो घर आइपुगेका छन् ताकि तिनीहरू मलाई हवाई जहाजमा पुग्न सक्दछ। पट, कार्लिटो, वीडीएस, र बर्बा सामान्य ग्राहकहरु र जी जस्तै छन्। म सधैं तिनीहरूलाई घृणा गर्दछु जब म तिनीहरूलाई चलाउँछु किनभने म सुपरस्टारहरूको एक टोली अनुगमन गर्दैछु र उनीहरूको संयुक्त लागत 40 लाख भन्दा बढी छ !! यसकारण, म सधैं सतर्क रहनु पर्छ र मेरो सबैभन्दा राम्रो र दुर्घटनाग्रस्त बारेमा सोच्ने प्रयास नगर्नुहोस्! तर ईरा सधैं मेरो छेउमा सधैँ मजाकहरू फुट्छन् र कुनै पनि चिन्ताबाट मुक्त हुन्छ। जब हामीले ईपीएल जित्नुभयो, ईरारा मलाई आउनु भयो र मेरी श्रीमतीलाई हान्नु र हाम्रो साथ एक तस्वीर लिनु भयो। साथै, उहाँले मलाई मलाई पिताजी भन्नुहुन्छ। परिवारको जस्तो हामी कति नजिक छौं।
ईराए एक फ्रांसीसी अन्तर्राष्ट्रिय हो, तर वास्तव मा सेनेगल बाट हो। उहाँले लेस उलिसको पछाडिको सडकमा बसाल्नुभयो। तथापि, यो फुटबल थियो जसले इजरालाई सडकबाट तलबाट रोक्न रोक्यो। मैले सोचें कि तिनीहरूका हेनरी त्यस क्षेत्रबाट पनि थिए।
ईरा र पार्क एउटै उमेरका हुन्। ईरा एक भन्दा बढि सजिलो छ Ji, तर दुवै धेरै कुरा गर्दैनन् र दुवै भित्री हुन्छन्। युक्रेनको बाहिर, यसको अस्तित्वको Ruud वान Nistelrooy या एडविन वान ड्रेस Sar, अधिकांश भन्दा जी को मित्रहरु विदेश बाट हो कि होइन। ब्रिटिश खेलाडीहरू सामान्यतया एकअर्कासँग लुकेर बाहिर जान्छन् र विदेशी खेलाडीहरू सामान्यतया क्लस्टर हुन्छन् र एकअर्कामा निर्भर हुन्छन्।
पार्क Ji Sung बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य-मित्रता निरन्तर ...
पार्क जारी छ ... In 2007 को गर्मी, एशियाई टूर को समयमा, ईरारा कोरिया भ्रमण गर्न सक्षम थिए। खेल अघि दिन, उहाँ सुवन मा हाम्रो घर आउनुभयो। म्यानचेस्टरमा, उनीहरूले सधैं मौका पाउनुभयो भने यदि उसले मौका पायो भने उसले कोरियामा हाम्रो घर जान सक्छ। त्यसकारण उनले मौका पाएपछि मैनचेस्टर युनाइटेड कोरियामा आए र हामीलाई भेट्टाए। उहाँ हाम्रो घर वरिपरि हेर्नुभएन, तर उहाँले मलाई पनि सोध्नुभयो भने मैले सियोलको नाइट क्लबलाई लिन सक्थे। मेरो जीवनमा नाइट क्लबको कहिलेसम्म मैले ईराइको इच्छामा दिएँ।
ईरा र म पहिलो साथीको रूपमा भेला थिएन तर 2005 मा दुश्मनको रूपमा। तिनीहरू चम्मेन्स लीगमा 16 को राउन्डमा घुमाए, मैले पीएसवी र ईरा मोरकोको लागि खेलेका थिए। दुई खुट्टामा, मैले मिडफिल्डको दाहिने छेउमा खेलेका थिए र इभरले बायाँ तिर खेलेका थिए र त्यसैले हामी दुवै युद्धमा प्रायः थिए। अन्ततः, PSV दुवै खेलहरू 1-0 र 2-0 जीता। कहिलेकाहीँ ईरारा त्यस खेलको बारेमा कहिलेकाहीँ सम्झाउँछ। उनले मजाक गरे "मैले आफ्नो बाइटमा सबै रातको छेउमा उभें। त्यसैले म वास्तवमा तपाईसंग मित्र हुन जस्तो लागेन।" "म तिमीमाथि एक ग्राउन्ड राख्छु।" आश्चर्यजनक कुरा, म र इभ्रा दुवै खेललाई राम्ररी सम्झन्छु। मलाई विश्वास छ कि हामी दुवैको लागि सबैभन्दा राम्रो साथी बन्नको लागि भाग्य थियो।
इजरा पहिलो पटक 2006 को जनवरी मा फिर्ता आउँदा, उनले टोली को समायोजन गर्न मा कठिनाइ थियो। त्यस समयमा, मिइकेल सिल्वेस्ट्रे र गब्रिएल ह्यानेजले इवाराका अगाडि आफ्नो स्थानहरूलाई सीता गरे र इर्रका लागि कुनै ठाउँ थिएन। जब पनि उनीहरूको खेल खेल्ने मौका पाएन, उनले गल्ती गरे र उनले तिनको स्थान खर्च गरे। उहाँ यतिबेला आक्रमण गर्न थाल्नुभयो कि उहाँले कहिलेकाहीं आफ्ना रक्षात्मक कर्तव्यहरू बिर्सनुभयो र तिनको मार्करबाट मुक्त हुनुभयो। दुर्भाग्यवश, उनले डब गरिएको थियो "पूर्णब्याक कि कहिल्यै फिर्ता छैन" Utd प्रशंसकको केहि भागहरु द्वारा। ती कठिन अवधिहरूमा, यो मलाई इव्रालाई सान्त्वना दिइयो र उसलाई एक क्यान्सर दिइयो। मैले नेदरल्याण्डमा फिर्ता अनुभव गरेको कठिन समयको बारेमा ईरेलाई भने र तिनलाई आवश्यक भरोसा दिन खोजे।
हामी इरेरासँग नजिकका मित्रहरू बन्नुभयो जब म फेरी फरवरी 2007 मा आफ्नो घरको पछि लागेँ। जब पनि ईवराकी पत्नी, पेट्रीसिया (मजाकिया ईरा को पहिलो नाम पटिसिस छ र उनको श्रीमतीको पहिलो नाम पेट्रिकिया छ), फ्रान्समा आफ्ना छोराछोरीलाई भेट्नको लागी उनको बच्चाहरु लिन्छ, ईरारा हाम्रो घरमा आउछ र बसोबास गर्छन जस्तो कि यो उनको घर हो। कहिलेकाहीँ, उहाँले मलाई घरको निम्तो पठाउनुहुन्छ र हामी सँगसँगै समय बिताउँछौं। मलाई लाग्छ कि एज्राले मलाई दया दिए दया कसरी दोहोर्याउँछ। जब मेरो बायाँ टुलमा एक सर्जरी थियो, मलाई सम्झना छ कि इव्राले आफ्नो कास्टमा राम्रो सन्देश प्राप्त गरिरहेको छ। जब स्प्रिंग ऑफ 2007 मा उनको दाहिनी घुटने मा एक सर्जरी थियो, इव्रा ले मलाई रोम को एक्सशैक्सिंग 7-1 मा गोल गरे।
पार्क Ji Sung बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य-निरन्तरता
ईराका पिता सेनेगल, डकारमा बस्छ। ईरा भन्छन्,, किनभने उनको बुबाले आफ्नो गृहनगर फिर्ता जान्छ, धेरै पटक विवाह गरे, यहाँ इभारा छ, यहाँ ईवा र इवरा ईवारा हरेक ठाउँ। ईराका पिता सामान्यतया सेनेगलमा रहन्छ, तर तिनी एक दिन मैनचेस्टर भ्रमण गर्न आए। ईरा पुरानो ट्रेफर्ड मा आफ्नो पिता को सामने खेल को संभावना को बारे मा उत्साहित थियो। यद्यपि, फर्गुसनले बेंचमा ईरा लगाए र खेल पछि पछि, इभर बेहोसी थियो। उनले आफ्नो क्रोध भित्र भित्र राखे तर घर फर्किएपछि उनी विस्फोट गरे। उहाँले चिच्याउनु भयो र जमीनमा चीजहरू फ्याक्नु भयो। यो स्पष्ट थियो कि उनले आफ्नो बुबालाई गर्व बनाउन चाहन्थे। मैले ईरा देखेँ र सोधे "के भयो भने मलाई के भयो?" मैले मेरो असाध्यै भावनाहरू प्रकट गरें। म यसलाई सामान्यतया लुकाउँछु। यद्यपि, म भन्न सक्दिन कि उनी अत्यन्तै निराश भए जब उनी एक निश्चित CL अन्तिममा खेल्न सक्ने मौका पाए। कहिलेकाँही, म चाहन्छु, इव्रा जस्ता भावनात्मक भावनाहरु मेरो अधिक भावुक हुनेछ।
एक वफादार वर्षमा, हामी घर जान लाग्यौं ईरारा बाँच्न प्रयोग गरिन्थ्यो। यो सात कोठाहरूसँग तीन कथाहरू छन्। इरेरा पनि हाम्रो घरबाट 3-4 मिनेटको बारेमा जान्यो। जब म प्रशिक्षणमा जान्छु, म र ईवारा सामान्यतया कार साझेदारी गर्दछु। एक दिन यो मलाई ड्राइविङ हुनेछ र अर्को दिन यो इरारा हो। जब प्रशिक्षण समाप्त हुन्छ, हामी कहिलेकाहीं खाना खानको लागि कोरियाली रेस्टुरेन्टमा जान्छौं।
Utd को लागि ईरा प्रेम मजबूत छ। उहाँले अन्तर मिलान भन्दा धेरै लाभदायक प्रस्ताव पाउनुभयो तर उहाँले तुरुन्तै यसलाई तल पार्नुभयो। जब पनि मेरो साथ एक फुटबल भिडियो खेल खेल्छ, मैले कभी पनि उसलाई Utd भन्दा एक टीम को चयन नहीं गरेको छ। अब हामी फेरि एकैसाथ विजयी छौं। केही दिनअघि इरेराले मलाई भने "अरे मित्र, गत वर्ष हामी एकअर्कासँग खेल्दैनौं, तर यो समयमा यो सँगै गर्न दिन्छ। याद राख्नुहोस्, यदि हामी मध्ये कुनै पनि स्कोर गर्छौं, हामीले सँगै मनाउनु पर्छ। "
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो पार्क Ji Sung बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.
दक्षिण कोरियाली फुटबल डायरी
Son Heung-min बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू